septembre 2013 – filazantsaramada
AN’IZA NY LANITRA SY NY TANY?
« Indro, an’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy. » Deot 10:14 Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra manambara tena. Manambara tena amin’ny zavatra noforonony Izy. Izy no namorona ny lanitra, Izy no namorona ny tany, ary ireny dia manambara an’i Jehovah Andriamanitra avokoa. Tokony hino Azy isika na […]
Publié parfilazantsaramada septembre 27, 2013 octobre 3, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AN’IZA NY LANITRA SY NY TANY?
Fitandremana Ambatomainty (SPAM)
« Izaho no nifidy anareo » Jaona 15: 16 Nanomboka ny volana Janoary 2013 no niatomboka ny fiaraha-miasa teo amin’ny Fitandremana Ambatomainty (Fileovana Ambohimandroso Gara) sy ny Feon’ny Filazantsara (FF). Mazoto amin’ny asa tsara tokoa Pastora Zoulder David Mpitondra Fitandremana Ambatomainty sy Ramatoa Virginie vadiny mpandraraha eto amin’ny FF amin’ny fitarihana ireo kristiana sy ireo mbola any […]
Publié parfilazantsaramada septembre 25, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fitandremana Ambatomainty (SPAM)
MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!
« Ary ho an’Izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amen. » Efes 3:20-21 Ny natao tsy hihoatra ny mpanao […]
Publié parfilazantsaramada septembre 20, 2013 septembre 19, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIHOATRA NOHO IZAY HEVERINTSIKA!
“Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao” Lioka 2:30 Izany Tenin’Andriamanitra izany no foto-kevitra nampitondraina ny Isantaona Avaratrimania izay notanterahina tany Andranomanelatra ny Alarobia 04 – 08 Septambra 2013 lasa teo. Ny Isantaona moa dia fivoriambe iray eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay tanterahin’ny Synodam-paritany tsirairay isa-toerana. Anisan’ny nanatrika izany fivoriamben’ ny SPAM izany ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 20, 2013 septembre 30, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Isantaonan’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM)
HISAFIDY NY ZAVA-POANA SA NY TENA HARENA? “Kanjo nony nikeninkenina tetsy sy teroa ny mpanomponao, dia lasa izy” (I Mpanj. 20:40) Araka ny hita ao amin’ny Mpanjaka voalohany, dia nisy mpaminany iray nilaza angano tamin’ny Mpanjaka Ahaba. Nilaza izy fa niandry gadra iray, nefa nanao tandrevaka izy tamin’izany (“sahirana etsy sy eroa”) ka dia nandositra […]
Publié parfilazantsaramada septembre 13, 2013 octobre 15, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AVY AMIN’NY SAMPANAN-DALANA TELO HO AMIN’NY HARENA,
« …Mandehana, misehoa amin’ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery, sady niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy ka nisaotra Azy… » Lioka 17: 14-16 Nisy mararin’ny habokana folo lahy nifanena tamin’i Jesosy, ary niantso mafy Azy ny mba […]
Publié parfilazantsaramada septembre 6, 2013 septembre 3, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA MAHAVONJY